काठमाडौँ, २५ असोज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले सम्हाल्ने भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा
देश अविभावकविहीन भएको छ: थापा
काठमाडौँ, २५ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अविभावक बिहीन भएको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौँमा आयोजित तत्कालीन राप्रपाका नेता स्व. चन्द्रबहादुर गुरुङको
यस्ताे छ प्रतिनिधिसभा बैठककाे कार्यसूची
काठमाडौँ, २५ असोज । प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार बस्दै छ । दिउँसो २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्ने बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर
निष्ठाको राजनीति हराउँदै गयो: रामचन्द्र पौडेल
चितवन, २५ असोज । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निष्ठा र इमान्दार व्यक्तिका हातमा नेतृत्व आउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस भरतपुर महानगरपालिका–१० ले आज आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा
सरकार सुकुम्बासीबिरोधी मात्रै होइन, हत्यारा हो भन्ने पुष्टी भयो: महेश बस्नेत
काठमाडौँ, २५ असोज । नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको राजीनामा मागेका छन् । खाँणको गृह जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट चार सुकुम्बासीको मृत्यु भएपछि नेता बस्नेतले राजीनामा मागेका
सुकुम्बासी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्छ: डा.भट्टराई
चितवन, २५ असोज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुकुम्बासी समस्या दिगोरुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उनले
काठमाडौँ, २५ असोज । संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को
नेपाल भारतबीचको समस्याको समाधान वार्ताबाटै निकाल्नुपर्छ: डा महत
काठमाडौँ, २५ असोज । भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल र भारतकाबीच सदियौँ पुरानो र नजिकको सम्बन्ध रहेकाले समय समयमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या देखापर्नु स्वभावि भएको
काठमाडौँ, २५ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अगामी १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन् । विजया दशमी, दिपावली, छठलगायतका चाडपर्वका अवसरमा पत्रकारसँग आइतबार
बुटवल, २४ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका हुन् । आइतबार शपथ